मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो खण्डको काम शुरु
काठमाडौं, २ असार । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो खण्डको काम शुरु भएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आयोजनाभित्र पर्ने जग्गाको सरकारले अधिग्रहण शुरु गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा याङग्री र लार्केखोलाको पानी मिसाएर काठमाडौं लैजानको लागि सरकार लागिपरेको हो । पहिलो चरणमा मेलम्ची आयोजनाले दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँमा झार्नेछ । त्यसैगरी याङ्ग्री […]
अब भक्तपुरका सडकमा ५० भन्दा बढि स्पिड गर्न नपाइने
भक्तपुर, २८ जेठ – महानगरीय प्रहरी परिषर भक्तपुरले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत भक्तपुर क्षेत्रमा बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारीसाधनको गति निर्धारण गरेको छ । प्रहरीले काभ्रेको साँगाबाट भक्तपुर भित्रिएपछि जडिबुटी मनोहरा पुलसम्म प्रत्येक सवारी साधनको अत्याधिक गति प्रतिघण्टा ५० किलोमिटर निर्धारण गरेको हो । महानगरीय प्रहरी परिषर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सविन प्रधानले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी […]
लाेकसेवाकाे विज्ञापन राेक्न राज्य व्यवस्था समितिकाे निर्देशन, के हाेला अब ?
काठमाडौं , २७ जेठ – संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लाेकसेवा अायाेगले पद पुर्तिका लागि अाव्हान गरेकाे विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग सोमबार छलफल गरेलगत्तै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । छलफलमा मन्त्री पण्डितले विज्ञापन संविधानसम्मत नै रहेको दावी गरे पनि समितिले भने रद्द गर्न […]
काठमाडौंमा सडक नखनी विजुलीका तार भुमिगत गर्ने काम शुरू
काठमाडौँ, २५ जेठ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रत्नपार्कदेखि महाराजगञ्जसम्म विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यसँगै सञ्चार प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने तार पनि भूमिगत गर्ने कार्य एकैपटक हुनेछ । भारतको केईआई इन्डस्ट्रिज, इन्डियासँग विद्युत् तार भूमिगत गर्न ठेक्का सम्झौता […]
Posted in पत्रपत्रीकाबाट,मुख्य समाचार,समाज Read More »
कर्मचारीलाई थर्काउँदै लालबाबुले भने – स्थानिय तहकाे विज्ञापन राेकिन्न
काठमाडौंँ, २० जेठ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभएको छ । आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएकोले सच्याउनुपर्ने सुझावहरु आईरहेको बेला उहाँले स्थानीय तहको मागको आधारमा मन्त्रालयले आयोगलाई पदपूर्तिका लागि काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको भन्दै विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट […]
कैलाली, १२ जेठ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले कैलाली जिल्ला स्थित टीकापुर खानेपानी आयोजनाको आइतबार उद्घाटन गर्नुभएको छ । एसियाली विकास बैंकको त्रृण सहयोगमा संचालित कूल ५५ करोड ९२ हजार लागतको उक्त आयोजनाको खानेपानी मन्त्री मगरले उद्घाटन गर्नु भएको हो । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यालयले […]
माेटरसाइकल पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने : सुरक्षा चिन्ता कि कमिसनको खेल ?
काठमाडौँ, ६ जेठ । काठमाडौँ उपत्यकामा हुने मोटरसाइकल र स्कुटर दुर्घटनामा पछाडि सिटमा बस्ने यात्रुको मृत्यु अस्वाभाविक ढङ्गले बढेपछि दुईवटा हेलमेटको प्रयोग अनिवार्य गरिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागसँगको छलफलपछि पछाडि बस्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर सङ्गठन (आईएसओ )बाट प्रमाणित चिह्न भएको हेलमेट लगाउन अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख […]
गाेरखा, ५ जेठ – गोरखाको एउटा वडा कार्यालयले मासु किन्न, खान र पशुपन्छी पाल्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। र, कसैले यसको उल्लंघन गरे ठूलो मात्रामा जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। ‘अब हाम्रो वडाभित्र पशुपन्छी काटमार गर्नेलाई ५० हजार, मासु बेचबिखन गर्नेलाई ५० हजार र किन्नेलाई पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ,’ चुमनुब्री गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष पेमा डुन्डुप लामाले […]
काठमाडौँ, ५ जेठ । बालबालिका बदलिएका छैनन् तर उनीहरूबाट गरिने हाम्रा अपेक्षा भने बढेका बढ्यै छन् । उनीहरूलाई सानो उमेरमा विद्यालय भर्ना गरिदिनु अनि बढी अपेक्षा राख्नु गलत भएको बालविज्ञहरूको भनाइ छ । शहरी जीवन संयुक्त परिवारबाट सानो परिवारमा बदलिँदै छ । बाबुआमा दुबै कामकाजी त्यसैले कलिलै उमेरमा केटाकेटीलाई स्कुल पु¥याएर व्यस्त दैनिकी भ्याउनु उनीहरूको […]
स्मार्ट लाइसेन्स नेपालीकरण रोकीँदा सेवाग्राही समस्यामा
काठमाडौँ, जेठ २ गते । सरकारले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा नेपालीकरण गर्ने कार्य रोक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । यो सेवा बन्द भएको जानकारी नहुँदा दैनिक सेवाग्राही कार्यालय आएर दुःख पाउने गरेका छन् । सरकारले गत भदौमा यो सेवा बन्द गरे पनि दैनिकजसो सेवाग्राही आइरहेको एकान्तकुनास्थित प्रदेश नं ३ यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले […]